Tajaajjilli geejjibaa magaalaa Finfinnee galuufi bahu adda cite - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, DIPTENDU DUTTA
Jiraattonni magaalota naannawa Finfinnee kan akka Buraayyuu, Laga Xaafoo fi Sabbataa irraa dubbifne, taajaajjilli geejjibaas ta'e daldalli guutummaan guutuutti akka hin jirreefi namootni gara magaalaa Finfinnee dhimmaaf deemuu barbaadan lafoo deemaa jiraachuu BBC'tti himanii jiru.
Mormiin lagannaa gabaa hojiirra oolmaa Labsii yeroo muddamaa balaaleffachuun guyyoota sadiif guutuu Oromiyaa keessatti waamame adda cituu tajaajila geejjibaafi daldalaa kanaaf sababa ta'uus dubbatu jiraattonni kunneen.
Murteen manni maree bakka bu'oota uummataa Jimaata darbe bifa wal falmisiisaa ta'een Labsii yeroo muddamaa hojiirra oolchuuf murteessuun magaalota Oromiyaa hedduu keessatti mormii cimaan simatame.
Kanaan wal-qabatees lubbuun namootaa darbuufi qabeenya irras miidhan gahu dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Aaddisuu Araggaa barruu fuula Facebook isaanii irratti barreessaniin himaniiru.
Komii fi gaaffiin uummataa sirnaan dhaggeeffatamee furmaata argachuu akka qaban MNO ni amana, akkuma kanaan duraa ummata isaa cina dhaabbachuun gaaffiiwwanii fi komiin ummata keenyaa akka furmaata argatan godhuuf cimee hojjechuu itti fufas jedhaniiru Obbo Addisuun.
Mormiin lagannaa gabaa fi tajaajila geejjibaa kun magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti bifa walfakkaataan gaggeeffamaa jira.
Akkasumas, jiraataan magaalaa Shaashamannee dubbifne, 'manneen baankii, hoteelonni, suuqiiwwaniifi manneen daldalaa hundi cufaa ta'uu, tajaajilli geejjibaa guutummaan guutuuttii adda cituu nutti himeera.
Namoonni miilaan magaala keessa socho'aa akka jiraniifi poolisii Oromiyaa dabalatee humni waraanaas magaalatti to'atee akka jirus jiraataan kun ni dubbata.
Magaalaa Amboottis bifa wal fakkaatuun tajaajjilli geejjibaafi sochiin daldalaa hundi adda cituu fi magaalatti keessa humni waraanaa cimaan akka jiru jiraatan dubbifne nutti himeera.
Godina Jimmaa aanaa Saqqaa Coqorsaa keessaatti mormiin bifa wal fakkaatuun yoo itti fufu har'a ganama dargaggoota daandii cufanii mormaa turan irratti dhukaasa huknoonni nageenyaa bananiin namoonni afur rasaasaan dhahamanii hospitaala galuu isaanii jiraataan aanichaa tokko BBC'tti himee jira.
Gama biraatinis ittigaafatamaan sub-qunnamtii Paartii magariisaa Yonaataan Tasfaa yeroo murtee hidhaasaaa xumuruun mana sirreessaa Ziwaayi hiikamuun himameera.
Haa ta'u malee haaluma mormii lagannaa gabaa naannoo Oromiyaa keessatti gaggeefamaa jiruun walqabateen geejiba argachuun gara Finfinnee galuu dadhabuusaa Haatii Obbo Ynaatan Aaddee MuCiti BBC'tti himaniiru.
Akkasumas miseensoonni maatiis garas deemuu isa simachu akka dadhabanis himaniiru.
Lagannaan gabaafi tajaajila geejjibaa Oromiyaa gutuutti hojiirra olaa jira